Ambatofotsy dia tsy nitondra kapa maivana izy nianika hazo efa ho 10 metatra latsaka. Tao ireo nihevitra fa novonoina io ary nahantona avy eo ka napetraka ny kapany fa tsy afa-nihanika kesika malama nitondra kapa izy.
Nazava anefa ny fampitam-baovao manokan'ny Zandary avy ao Ambatofotsy omaly fa miaramila io hita faty io. Araka ny fizahana ny razana notanterahin'ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana ary ny manam-pahefana teny an-toerana, voamarina fa maty namono tena io lehilahy io. Ny andro mialoha io izy no efa tsy hita teo amin'ny ankohonany izay monina aty an-drenivohitra. Mbola nandrasana ny fikarakaran'ny havany ny razana sy ny fandevenana ka ato ho ato vaomonina afaka hiroso amin'ny fanadihadiana raha ny vaovao nampitain'ny zandarimariam-pirenena avy eo Ambatofotsy hatrany.
Ankoatra ny olana ara-pianakaviana sy fitiavana ary fiainana izay anton'ny famonoan-tena toy zao anefa, voalazan'ny mpitandro filaminana hafa ankoatra an'Ambatofotsy fa olana arak'asa no nampamoifo ity miaramila ity. Ny fanadihadian'ny mpanao famotorana izay andrasana no hamaritra ny zava-nisy marina.